GGI Insurance Ready for Action | Myanmar Business Today
Home Business Local GGI Insurance Ready for Action
November 28 wasabig day for foreign-owned and joint-venture insurance companies as authorities finally handed out licenses to operate in Myanmar’s recently opened up market.
One of these newly licensed companies is Shwe Taung Group’s Grand Guardian Insurance (GGI), which recently partnered with Japanese giants Nippon Life and Tokio Marine.Myanmar Business Today sat down with U Myo Naung, CEO of GGI Tokio Marine General Insurance, to talk about his company’s market plans as well as prospects for the general market. GGI Tokio Marine isajoint venture between GGI and Tokio Marine & Nichido Fire Insurance,
Jointly with its partners, GGI has proposed 10 new insurance products to sell to customers.
“When we sell new products, we need to get approval from the Insurance Business Regulatory Board. Now, we have proposed our new products to the board,” said U Myo Naing, who is also the managing director of GGI Insurance.
The industry veteran explained that, through their partnership with foreign firms, local insurers will have access to capital and technology as well as better capacity in the market.
Insurance products currently offered by local companies are 30 years behind the market. Before the government opened up the sector to foreign companies, the domestic insurance market had little competition.
With foreign players in the field, said U Myo Naung, local insurance companies need to have enough capacity as Myanmar’s insurance market is huge.
By partnering with the Japanese giants, GGI will be able to provide insurance services to Japanese companies in the Thilawa Special Economic Zone as well as offer marine cargo insurance services, which exporters place when trading with foreign partners.
“Partnering with Tokio Marine will give us access to its branches in 42 countries,” U Myo Naung said. “Say, you are importingacar from Japan, you can buy insurance from Tokio Marine. If you are exporting beans to India, Japan or China, you can have insurance coverage from GGI Tokio Marine. Then you will receive compensation in case of products being damaged on the way as they have representative offices [in those countries]”.
The executive revealed that GGI’s two joint ventures expect to soon provide 10 new insurance services in three categories.
“We will provide various insurance services such as comprehensive factory insurance, comprehensive construction insurance and product liability insurance. A factory can purchase comprehensive factory insurance for the whole factory or building.”
The initial target groups for the new insurance products are business owners, traders, factories and restaurants. In the second step, the company will market its insurance policies to middle-income earners, and then to all of Myanmar’s 54 million population.
Even with newcomers in the market, industry players still havealot of room to maneuver as they all have different market purposes, according to U Myo Naung.
“We asalocal company can communicate with local people and sell the products in kyats,” he said. “[Foreign companies] have different market targets. We target the middle class segment. We will openabranch with high technology. I think foreign insurance companies will focus on the high end of the market. Myanmar isabig market. What we need to do is to expand the market for insurance.”
Higher incomes will boost the number of people placing insurance. Among GGI’s insurance products, vehicle insurance and farmers insurance are the most popular, with farmers insurance paying out the biggest amount of compensation. Fire insurance has seen lower compensation payout rate.
“Here, 80 percent of the population are in agriculture. Farmers insurance stands onayearly basis,” said Mr. Tan Yeow Hau, CEO of GGI Nippon Life,ajoint venture between Grand Guardian Life Insurance and Nippon Life Insurance. “Microfinance institutions love to promote this product. They provide loans to farmers and ask if they want to buy this product.”
Despite the fact that comprehensive vehicle insurance is the most popular product in the market, only 10 percent of vehicles in Myanmar are insured.
“Myanmar has 1.5 million vehicles, but only over 100,000 units or 10 percent have insurance. There is still way to go,” said U Myo Naung.
GGI saw K25 billion in insurance as of March 31 and expects to seea60 percent annual increase.
“For vehicle insurance, we have to pay compensation for 70-80 out of 100 insured vehicles, as they have higher accident rates,” GGI’s chief executive said. “People are very cautious about fire and therefore fire accident rate is low, and compensation as well. For other products such as cargo insurance, the compensation rate is low. Vehicle insurance has the highest [payout rate].”
GGI and Nippon Life signedapartnership deal to create Grand Guardian Nippon Life Insurance in July with GGI owning 65 percent of the joint venture.
“GGI decided to partner withaforeign insurance company withaview to enter the international market. We have already got an agreement with 130-year-old Nippon Life Insurance to jointly provide services,” said Daw Hhin Hla Sein, GGI’s deputy chief executive officer.
GGI partnered with Tokio Marine to form Tokio GGI Marine General Insurance,aprovider of general insurance services, with GGI owning 65 percent and the Japanese company 35 percent.
Nippon Life Insurance, established in 1889, is Japan’s largest life insurance company while Tokio Marine Insurance, established in 1875, is the oldest insurance company in Japan.
In 2017, GGI won the best-selling insurance product in Myanmar in the health insurance category from the Insurance Business Regulatory Board. It is also listed as one of the most transparent companies in Myanmar in the Pyit Thit Sa report.
On November 28, the Ministry of Planning and Finance awarded licenses to five foreign-owned life insurance companies, three joint-venture life insurance companies and three joint-venture general insurance companies. Currently, there are 12 local insurance companies and one state-owned insurance company called Myanma Insurance.
With new players entering the market, Myanmar’s insurance sector is likely to see increased action.
GGI အာမခံလုပ်ငန်း၏ ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများနှင့် ဖော်ဆောင်မည့်အနာဂတ်အစီအစဉ်
GGI Tokio Marine General Insurance မှ CEO နှင့် Grand Guardian General Insurance Company မှ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးမျိုးနောင်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် နိုင်ငံခြားအသက်အာမခံကုမ္ပဏီများနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပဖက်စပ်အာမခံကုမ္ပဏီများကို အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်များ ထုတ်ပေးခဲ့သည် ။
အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်များထုတ်ပေးသည့်ကုမ္ပဏီများစာရင်းတွင် ရွှေတောင်အုပ်စုဝင် ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်သည့် GGI အာမခံကုမ္ပဏီလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။
ရွှေတောင်အုပ်စုဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် GGI အာမခံကုမ္ပဏီသည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ နံပါတ်တစ် အထွေထွေအာမခံ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Tokio Marine ကုမ္ပဏီနှင့် အထွေထွေအာမခံလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန် ပူးပေါင်းလိုက်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးအသက်အာမခံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Nippon Life အာမခံကုမ္ပဏီနှင့် အသက်အာမခံလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် ပူးပေါင်းထားသည်။
Grand Guardian General Insurance Company (GGI)နှင့် Tokio Marine and Nichido Fire Insurance Company နှစ်ခုဖက်စပ်ထူထောင်သည့် GGI Tokio Marine Generanl Insurance ၏ CEO ဦးမျိုးနောင်နှင့် Myanmar Business Today ကတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အာမခံလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အနာဂတ်အစီအစဉ်နှင့် ဈေးကွက်သုံးသပ်ချက်များကို မေးမြန်းခဲ့သည်။
GGI အနေဖြင့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်းပြီးနောက်တွင် အာမခံအမျိုးအစားအသစ် (၁၀)မျိုး ကို အများပြည်သူများကို ထုတ်ရောင်းနိုင်ရန် အာမခံကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ထံသို့ တင်ပြထားကြောင်း သိရသည်။
“ကွန်တော်တို့က အာမခံအမျိုးအစားအသစ်ထုတ်တဲ့အခါမှာ အာမခံကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကို တင်ပြပြီးမှ ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်။ ပထမအဆင့်အနေနဲ့ တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်” ဟု GGI Insurance Company က မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာအဖြစ်ပါတာဝန်ယူထားသည့် ဦးမျိုးနောင်က ဆိုသည်။
ယခုကဲ့သို့ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများနှင့်ပူးပေါင်းလိုက်ခြင်းကြောင့် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများ၏ ဈေးကွက်ကြီးထွားလာပြီး နည်းပညာအကူအညီများရနိုင်သကဲ့သို့ ငွေရေးကြေးရေးများပါ ရရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက သုံးသပ်သည်။
ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများ၏ လက်ရှိရောင်းချနေသည့် အာမခံများသည် ဈေးကွက်အခြေအနေနှင့် နှစ် ၃၀ လောက်နောက်ကျလျက်ရှိပြီး နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများကို လုပ်ကိုင်ခွင့်မပေးမီက ပိတ်နေသည့်ဈေးကွက်ဖြစ်သောကြောင့် ကိုယ့်လူနှင့် ကိုယ်ရောင်းဝယ်နေသည့် ဈေးကွက်ဖြစ်သောကြောင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုအားမကောင်းခဲ့ပေ။
“ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ပိတ်နေတဲ့ ဈေးကွက်ကို ကိုယ်လူနဲ့ ကိုယ်လုပ်တဲ့အခါမှာ ယှဉ်ပြိုင်မှုအားမကောင်းပါဘူး။ အကာအကွယ်ပေးထားရင် လိုင်စင်အသစ်လည်းမရှိဘူး။ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေလည်းမရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ဈေးကွက်မှာ ရေရှည်လုပ်ကိုင်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်” ဟု ဦးမျိုးနောင်က အာမခံဈေးကွက်ကို ရှင်းပြသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဖွင့်ပေးလိုက်သည့် ဈေးကွက်တွင် အာမခံကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် လုပ်နိုင်စွမ်းရှိရန်သာ အရေးကြီးပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အာမခံဈေးကွက်မှာလည်း အလွန်ကြီးမားကြောင်း ဦးမျိုးနောင်က ဆိုသည်။
လက်ရှိပူးပေါင်းလိုက်သည့် ဂျပန်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုဖြင့် ယခင်က သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် ဂျပန်များလုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် အာမခံလုပ်ငန်းများကိုပါလုပ်ကိုင်လာနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့် ကုန်သွယ်ရာတွင် ထားသည့် ကုန်ပစ္စည်းအာမခံအမျိုးအစားများကိုပါ နိုင်ငံခြားနှင့် ဖက်စပ်အာမခံကုမ္ပဏီများတွင် အာမခံထားနိုင်တော့မည့်ဖြစ်ကြောင်း ဦးမျိုးနောင်က ရှင်းပြသည်။
“အခု Tokio Marine နဲ့ ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ ၄၂ နိုင်ငံမှာ Tokio Marine ရုံးခွဲတွေရှိပါတယ်။ ဂျပန်ကနေပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံက ကားတစ်စီးသွင်းတော့မယ်ဆိုရင် Tokio Marine ကနေအာမခံဝယ်လို့ရပါတယ်။ ပဲတွေဘာတွေ ပို့မယ်ဆိုရင် ဂျပန်ပို့မလား ရှန်ဟိုင်း ကိုပို့မလား အိန္ဒိယကို ပို့မလား သင်္ဘောသွားတဲ့အချိန် တစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင် GGI Tokio Marine အကာအကွယ်ပေးလို့ရပါတယ်။ တင်ပို့တဲ့နိုင်ငံမှာ တစ်ခုခုပျက်စီးသွားတယ်ဆိုရင် သူရဲ့ အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် တခါတည်းစိစစ်ပြီးတော့ တစ်ခါတည်းလျော်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်” ဟု ဦးမျိုးနောင်က ဆိုသည်။
“ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရန်ကုန်ကနေပြီး normal trade သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်တွေလုပ်နေပါတယ်။ မူဆယ် မြဝတီကလည်း ကုန်သွယ်ရေးတွေလုပ်နေပါတယ်။ ရန်ကုန်ကနေ Normal Trade ရန်ကုန်ကနေ ဝင်ထွက်တဲ့အခါမှာ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်အားလုံးအတွက် အာမခံကို မြန်မာနိုင်ငံက ပေးနေတာမရှိပါဘူး။ ကားတစ်စီး ဂျပန်ကသွင်းမယ်ဆိုရင် ဂျပန်ကနေ အာမခံဝယ်ရပါတယ်။ အထည်ချုပ်တွေ ပဲတွေပို့ကုန်တွေပို့မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံခြားကနေ အာမခံဝယ်ရပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်ရှင်းပြသည်။
GGI ၏ ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမှ ထုတ်ရောင်းမည့် အာမခံအမျိုးအစား ၁၀ မျိုးကို မကြာမီထုတ်ရောင်းနိုင်မည်ဟု မျှော်မှန်းထားပြီး အဆိုပါ အာမခံအမျိုးအစားသစ် (၁၀) မျိုးသည် ခေါင်းစဉ်ကြီး ၃ ခုအောက်တွင် ထည့်သွင်းထားကြောင်း သိရသည်။
“သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်မှာ ဂျပန်တွေလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်(အာမခံ)တွေကို ခွင့်ပြုပေးပါဆိုပြီးတင်ထားပါတယ်။ ဒါလည်းမကြာခင်ရတော့မှာပါ ”ဟု ဦးမျိုးနောင်က ဆိုသည် ။
“ စက်မှုဇုန်တွေအတွက် စက်ရုံတစ်ခုလိုအပ်တဲ့ အလုံးစုံအာမခံ ၊ ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာအလုံးစုံအာမခံ ၊ ရောင်းလိုက်တဲ့ဆေးတစ်ခုခုကို စားလိုက်လို့ (အညွန်းနဲ့မညီတာ ၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်တာမျိုးဆို) အာမခံလျော်ပေးရမယ်။ ကားဝယ်ထားလို့ အာမခံထားတယ် အင်ဂျင်ချို့ယွင်းလို့ဆို အာမခံပေးလျော်တာမျိုး ၊ လုပ်လိုက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ လွဲချော်သွားရင် ပြန်လျော်ပေးတဲ့အပိုင်း ၊ ခေါင်းစဉ်ကြီးသုံးခုထဲမှာ ခေါင်းစဉ်သေး ၁၀ ခုနဲ့ လုပ်ကိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ စက်ရုံတစ်ခုလုံးလိုအပ်တဲ့ အလုံးစုံအာမခံမှာ စက်ရုံထားလို့ရတယ်။ အဆောက်အအုံထားလို့ရတယ်” ဟု ဦးမျိုးနောင်က ဆိုသည်။
သီလဝါကဲ့သို့သော အထူးစီးပွားရေးဇုန်နှင့် စက်မှုဇုန်များရှိ စက်ရုံ ၊ အလုပ်ရုံနှင့် အဆောက်အအုံများအတွက် စက်ရုံတစ်ခုလုံးအလုံးစုံအာမခံ၊ ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာအလုံးစုံအာမခံနှင့် ရောင်းချလိုက်သည့် ကုန်ပစ္စည်းအပေါ်တွင် ထားရှိသည့် အာမခံအမျိုးအစားများကို လုပ်ကိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိ GGI နှင့် ပူးပေါင်းထားသည့် ဂျပန်အာမခံနှစ်ခုမှ ရောင်းချမည့် အာမခံအမျိုးအစား သစ်များသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ၊ အရောင်းအဝယ်လုပ်ကိုင်နေသူများ၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့် စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းများအတွက် ရည်ရွယ်ကြောင်း သိရသည်။
သို့သော် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင်ရှိသည့် လူဦးရေ ၅၄ သန်းလုံးအတွက် အာမခံများရောင်းချနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားပြီး လက်ရှိရည်ရွယ်ထားသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအပြင် ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေအသင့်အတင်ရှိသူများကို အာမခံအမျိုးအစားများရောင်းချနိုင်ရန် ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများကို လိုင်စင်ထုတ်ပေးလိုက်သော်လည်း နိုင်ငံခြားဖက်စပ် ကုမ္ပဏီများနှင့် နိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီများ၏ ဈေးကွက်ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကွဲပြားသောကြောင့် အာမခံဈေးကွက်ကို ချဲ့ထွင်နိုင်ရန်သာလိုကြောင်း ဦးမျိုးနောင်က သုံးသပ်သည်။
“ ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီဖြစ်တော့ မြန်မာလူမျိုးနဲ့ ဆက်ဆံတယ်။ ကျပ်ငွေနဲ့လည်းရောင်းတယ်။ သူတို့ဦးတည်တဲ့ဈေးကွက်နဲ့ကွဲလွဲမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့က အလယ်အလတ်ဈေးကွက်ကို ဦးတည်ပါတယ်။ ရုံးခွဲလည်းအခုမှစဖွင့်မယ် နည်းပညာမြင့်မယ်။ နိုင်ငံခြားသားလာမယ်ဆိုတော့ အမြင့်ပိုင်းဈေးကွက်ကို လျာထားမယ် ထင်ပါတယ်။ ၅၄ သန်းသောဈေးကွက်ကို အားလုံးလက်ခံနိုင်အောင် ထားကြတယ်ဆိုရင် ပိုအောင်မြင်ပါ တယ်။ ဈေးကွက်ကကြီးပါတယ်။ ချဲ့ထွင်နိုင်ဖို့ဘဲလိုပါတယ်” ဟု ဦးမျိုးနောင်က ဆိုသည်။
ဝင်ငွေမြင့်မားလာမှသာ အာမခံထားရှိမှုမြင့်တက်လာနိုင်ပြီး GGI အာမခံကုမ္ပဏီတွင် မော်တော်ကားအာမခံနှင့် တောင်သူလယ်သမားအာမခံထားရှိမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီး မော်တော်ကားအာမခံအမျိုးအစားမှာ ပေးလျော်ရမှုအများဆုံးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ ဒီနိုင်ငံ လူဦးရေရဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းက စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာ ရှိတယ်။ ဒီတောင်သူလယ်သမား အာမခံအမျိုးအစားက နှစ်အလိုက်ပေးတာပါ” ဟု Grand Guardian Life Insurance Company Limited နှင့် Nippon Life Insurance Company နှစ်ခုဖက်စပ်ထူထောင်ထားသည့် GGI Nippon Life ၏ CEO Mr Tan Yeow Hau ကမှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။
ယင်းကဆက်လက်၍ “တခြားအခြေအနေမျိုးဆိုရင် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းတွေ ဒီအာမခံအမျိုးအစားကို ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ စိတ်ဝင်စားတယ်။ သူတို့က လယ်သမားတွေကို အသေးစားချေးငွေချေးကြတယ်။ ဒီအာမခံအမျိုးအစားထားမလားလို့ မေးကြတယ်” ဟု ဆိုသည်။
လက်ရှိ မော်တော်ယာဉ်အလုံးစုံအာမခံထားရှိမှုမြင့်မားနေသော်လည်း မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင်ရှိသည့် ကားအစီးရေနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသာထာရှိသည့်အခြေအနေတွင်ရှိနေသေးသည်။
“မြန်မာမှာဆိုကားစီးရေ ၁ ဒသမ ၅ သန်းရှိတယ်။ ထားတဲ့အခါမှာ တစ်သိန်းကျော်ကျော် တစ်သိန်းစွန်းစွန်းဘဲထားတော့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းဘဲရှိပါသေးတယ်။ အများကြီးထားဖို့ရှိပါသေးတယ်”ဟု ဦးမျိုးနောင်က ဆိုသည်။
GGI အနေဖြင့် ၂၀၁၉ မတ်လ ၃၁ ရက်တွင် စာရင်းချုပ်သည့်အချိန်တွင် အာမခံထားရှိမှုဝင်ငွေ ကျပ် ၂၅ ဘီလီယံရှိပြီး နှစ်စဉ် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းတိုးနေပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ထပ်၍ တိုးပွားလာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးမျိုးနောင်က သုံးသပ်သည်။
ထိုသို့ အာမခံထားရှိမှုမှ ဝင်ငွေရရှိသည့်အပြင် ပေးလျော်သည့်အပိုင်းတွင် မော်တော်ကားအာမခံအတွက် ပေးလျော်မှုအများဆုံးဖြစ်ပြီး မီးအာမခံနှင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးပိုင်းတွင် ပေးလျော်မှုနည်းကြောင်း သိရသည်။
“မော်တော်ကားက ၁၀၀ လောက်ကောက်ရင် ၇၀ ၈၀ လောက်က လျှော်ရပါတယ်။ ကားတွေက မတော်တဆမှုတွေများကြတယ်။ မီးကတော့ မီးရေးထင်းရေးစီမံချက်သေချာလုပ်ထားတော့ ပေးလျော်မှုနည်းပါတယ်။ ကုန်စည်ပိုတာတွေကလည်း ပေးလျော်မှုနည်းပါတယ်။ ပေးလျော်မှုအများဆုံးကတော့ ကားဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦးမျိုးနောင်က ပြောသည်။
GGI ၏ ဖက်စပ်ပူးပေါင်းမှှုအနေဖြင့် ၂၀၁၉ ဇူလိုင်လတွင် Grand Guardian Insurance နှင့် Nippon Life တို့ သည်ပဏာမသဘောတူညီမှု လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး GGI မှ ရှယ်ယာ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းထည့်ဝင်မည်ဖြစ်သည်။
ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီကို Grand Guardian Nippon Life Insurance ဟု အမည်ပြောင်းလဲထားပြီး အသက်အာမခံအမျိုးအစားနှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးမည်ဟု GGI မှ သိရသည်။
“ကျွန်မတို့ GGI က နိုင်ငံတကာကို ထိုးဖောက်ဖို့ဆိုရင် နိုင်ငံခြားကုမဏီတွေနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ဖို့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါ တယ်။ နှစ်ပေါင်း ၁၃၀ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ Nipon Life အာမခံကုမ္ပဏီနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ဖို့သဘောတူညီချက်ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ် ” GGI Deputy Chief Executive Officer ဒေါ်နှင်းစိန်က ပြောသည်။
ထို့အတူ GGI အာမခံကုမ္ပဏီနှင့် Tokio Marine ကုမ္ပဏီတို့သည်လည်း အထွေထွေအာမခံမျိုးအစားကို ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်ပြီး GGI မှ ရှယ်ယာ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းထည့်ဝင်ကြောင်း သိရသည်။
Nippon Life အသက်အာမခံကုမ္ပဏီကို ၁၈၈၉ ခုနှစ်တွင် စတင်ထူထောင်ခဲ့ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံး အသက်အာမခံကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
Tokio Marine သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသောအာမခံဖြစ်ပြီး ၁၈၇၅ ခုနှစ်တွင် စတင်ထူထောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
GGI ကုမ္ပဏီသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကပေးသည့် ကျန်းမာရေးအာမခံ အရောင်းရဆုံးဆုကို ရရှိထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိစီပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုသနုတေသနလုပ် ထားသည့် ပွင့်သစ်စ အစီရင်ခံစာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည့် ကုမဏီများစာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
အစိုးရက ရာနှုန်းပြည့်နိုင်ငံခြားအသက်အာမခံကုမ္ပဏီ လိုင်စင် (၅) ခု ၊ ဖက်စပ်အသက်အာမခံကုမ္ပဏီလိုင်စင်(၃)ခု နှင့် ဖက်စပ်အထွေထွေအာမခံကုမ္ပဏီလိုင်စင်(၃) ခု ကိုချထားပေးလိုက်ပါသည်။ လက်ရှိလည်ပတ်နေသော ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကပိုင်အာမခံ ကုမ္ပဏီ (၁၂) ခုနှင့် အစိုးရအာမခံ လုပ်ငန်းတို့ကရှိလာရာ မကြာမီအာမခံဈေးကွက်၏ ယှဉ်ပြိုင်မှှုမှာ ပိုမိုအားကောင်းလာတော့မည် သဘောလည်း ဖြစ်သည်။လောလောလတ်လတ်လိုင်စင်ရရှိထားသော ကုမ္ပဏီများအားလုံးသည်လည်း သူ့နည်းသူ့ဟန်နှင့်ဈေးကွက်ကို ဖော်ဆောင်ရန် ပြင်နေကြသည်။
Previous articleMytel, MBAPF to Provide Digital Literacy Training to 14 Universities
Next articleHow Google’s Founders Slowly Stepped Away From Their Company